आज यी प्रदेशमा हुन्छ ‘धेरै भारी’ वर्षा, सतर्क रहन मौसमविद्को सुझाव – Rapti Khabar
असोज ७, काठमाडौं । आज बुधबार सबै प्रदेशमा ठूलो वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविद्ले आग्रह गरेका छन्।
आज २०७७ भदौ १३ गते शनिबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस
Posted on August 29, 2020 Author Rapti Khabar
आज २०७७ भदौ १३ गते शनिबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् […]
ताइवानमा दोहोरिन सक्छ अमेरिका र चीनले कोरियामा गरेको ग’ल्ती
वाङ सियाङवेइ/काठमाडौं, भदौ २१ अक्टोबर १९५० मा उत्तर कोरियासँगको सीमामा रहेको यालु नदी पार गरेर चिनियाँ ज’नमुक्ति से’ना (पीएलए) कोरिया यु’द्धमा सहभागी भयो। यो क्रु’र यु’द्ध जुलाई १९५३ सम्म लम्बियो। र, यो अहिलेसम्म अमेरिका र चीनबीच भएको पहिलो र एक मात्र यु’द्ध हो। सो यु’द्धको ७० औँ वर्षगाँठ मनाउने व्यापक तयारी अहिले बेइजिङले गरिरहँदा चीन […]
इतिहास सबैको हुन्छ । हो, कोहि गरिब परिवारमा जन्मियो, त कोहि सम्पन्न परिवारमा । नेपाली समाजमा आ–आफ्नै समस्या थिए । देशमा राजनीतिक समस्या मात्रै होइन, सामाजिक समस्या धेरै छन् । दाङको थारु बस्तीमा जन्मिएर, हुर्किएकी शान्ता चौधरीका जीवनका कथापनि बिल्कुलै फरक छन् । के शान्ता मात्रै हुन् त त्यो गाउँको, त्यो दुःखमा हुर्किएकी ? पक्कै […]
लगातार पेट बढिरहेको छ ? अपनाउनुस् यी सजिला तरिका, हेर्नुस